B2B: Mavhidhiyo ari Kufurira Kutenga Sarudzo | Martech Zone
Vhidhiyo yakaitwa zvishoma nekutengesa kwevatengi, asi iwo chaiwo mukana unogona kunge uine bhizinesi-kune-bhizinesi (B2B) kushambadzira. Mune ongororo ichangoburwa yakaburitswa naEccolo Media, multimedia yakanyora runyorwa rwevamiriri senzira dzinokurumidza kukura dzinoshandiswa nevanoita sarudzo nevatangi kuita sarudzo dzekutenga.
Sezvatakawana muongororo yega yega yapfuura, mhando dzinonyanya kudyiwa dzezvibatiso mabrochure ezvigadzirwa & mapepa ematafura. Muchokwadi, vakapindura vakangowedzera mashandisiro avo erudzi urwu rwezvinyorwa pamusoro pemakore: kubva makumi manomwe kubva muzana muna70; kusvika 2008 muzana muna 78; kusvika gore rino kuwanikwa kwe2009 muzana. Nyaya dzezvakaitika uye mapepa machena, mushure mekuita kukwakuka kukuru mumashandisirwo emitengo pakati pa83 na2008, yakaramba yakati sandara pakati pa2009 na2009. Shanduko huru dzaive mukuwandisa kwevanopindura vachidya mavhidhiyo uye podcast & mafaera ekuteerera. Muna 2010, zvikamu makumi maviri nemasere chete zvevakabvunzwa vakadya mhando idzi dzezvibatiso. Muna 2008, podcasts yakaita zvine mwero kuwana kusvika makumi matatu nezviviri muzana Vhidhiyo yekushandisa yakawedzera zvine hunyoro kubva pa28 muzana muna 2009 kusvika pa32 muzana muna28.
Yakakwira mhando, yakaderera mutengo kugadzirwa kwevhidhiyo uye kuitisa inoita kunge iri kutyaira yakawanda yekutorwa. Zvakare, bandwidth yepamusoro uye yakasarudzika sarudzo yezvishandiso nemidziyo yekuona vhidhiyo pakupedzisira yasundira multimedia zvakanyanya. Vhidhiyo iri kuve yakakosha zano. Kana usati waigamuchira, unofanirwa kunge uchiisa pamwechete zano izvozvi ... ongororo yacho inopa humbowo hwekuti vhidhiyo yave kuita svikiro rakakosha mukati mezvibvumirano zvako.
Iko kune toni yeruzivo mune ino yemahara B2B Ongororo Rondedzero - kunyanya pachibvumirano chine simba rakanyanya: Whitepapers. Pepa rinopa ruzivo rwakadzama pane izvo zvinoita kuti vachena vanyoro vave vakuru uye chii chinoita kuti vatadze, pamwe nekukura kwemakambani avanokwezva.
Tags: kuongorora vaenzijames bond chigadzirwa kuiswajiveMari Smithyakatanga emailvideo chatkunyora
Vana Varege Tweet